Soo-saareyaasha Mashiinnada Heer-kulka Caagga ah & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshada
Mashiinkan heerkulbeegga ah ee loo isticmaalo soo saarista baahida sare ee la tuuri karo ee cunnada cusub/degdega ah, koobabka caagga ah ee khudradda, sanduuqyada, taarikada, weel, iyo dawooyinka, PP, PS, PET, PVC, iwm.
Cadaadiska kuleyliyaha PLC Machi...
Horudhaca Alaabta Makiinada heerkulbeegga Cadaadiska Inta badan soo saarida weelal caag ah oo kala duwan ( saxaarad ukun, weel miro, weel cunto, weelasha baakadaha, iwm) oo leh heerkulbeeg...
Saddexda Saldhig Cadaadis Xun...
Codsiga Mashiinka Samaynta Fakiumka Tooska ah Inta badan soo saarista weelal caag ah oo kala duwan ( saxaarad ukun, weel miro, weelasha baakadaha, iwm) oo leh xaashi heerkulbeeg ah. vacuum Samaynta...
Saldhig Keliya Heerkul Toos ah...
Hal Saldhig oo toos ah Mashiinka Heerarka Heerarka, iyadoo la adeegsanayo qaybo sax ah oo la warshadeeyey, taageeraya caaryada is-sameeyey, dhalaalidda muraayadda, nidaamka qalliinka isku dhafan, fududahay in la fahmo.
Afarta Saldhig ee Balaastigga Weyn ee T...
Afar xarumood oo waaweyn Mashiinka heerkulbeegga caagga ee PP ayaa samaynaya, goynaya oo isku dhejinaya hal xariiq. Waxaa si buuxda u kaxeeya servo motor, hawlgal xasilloon, buuq yar, hufnaan sare, ku habboon ...